Margarekha स्वास्थ्य समस्या र हेल्थ कन्सर्न – Margarekha
स्वास्थ्य समस्या र हेल्थ कन्सर्न
हेल्थ कन्सर्न भन्नाले सामान्य नेपाली भाषामा “स्वास्थ्य सरोकार” भन्ने बुझिन्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धि हरेक प्रश्नको भलाकुसारी गर्ने थलो भन्ने जनाउँछ । २१ औं शताब्दीमा विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायापलट आएसंगै नेपालमा पनि यसका केहि छनकहरु देखिएका छन् । शहरहरुमा अस्पतालको संख्या बृद्धि हुनु, नेपालमै बर्षेनी हजारौ संख्यामा डाक्टरहरु उत्पादन हुनु र चिकित्सा क्षेत्रमा दिनप्रति दिन नया“ परिवर्तन आउनु यसको जिवन्त उदाहरण हो । यद्यपि यी सबै प्रयोग हाम्रो जस्तो विकाशन्मुख राष्ट्रमा केवल एक वर्गमा मात्रै सिमित भएको छ । नेपालको एक चौथाई जनसंख्या मात्रै यी कुराहरुबाट लाभान्वित भएको छ । न त यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धि मुद्दाहरुमा सरोकारवाला निकाय या योजना बनाउने सरकार नै गम्भीर भएको पाइन्छ । २०४८ सालपछि हाम्रो देशमा स्वास्थ्य नीति परिमार्जित नगरिनु यसको एक प्रष्ट नमुना हो ।
हेरक चीजको उदय कुनै पनि कुराको विष्फोट पछि मात्रै हुन्छ र त्यो उदय एक भयड्ढर वेग तुफान बन्छ । जसरी यस संस्थाको उदय चिकित्सा संस्थान महाराजगंज ९क्ष्इः० बाट उत्पादित डा. सुवास प्याकुरेलको नया“ बिचार र सिद्धान्तबाट भयो र आज बिस्तारै त्यही बिचारको प्रयोग हेल्थ कन्सर्न देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नवीन अध्याय बनिरहेको छ । यसका अलावा यस संस्थामा देशकै विशिष्ट व्याक्तिहरुको पनि संग्लग्नता रहेको छ । यसका सल्लाहकारहरुमा डा. सारादाराम भण्डारी यु.एस.ए, प्रध्यापक डा. गोपाल प्रसाद आचार्य, प्राध्यापक डा. कान्ति गिरी, डा. मारिवन मलेसिया, जया शाह, सुइम फिमराईट नर्वे, विशाल नरिया भारत रहेका छन् । बिशुद्ध सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ संचालित यस हेल्थ कन्सर्नको उद्देश्य भनेको बिरामीहरुलाई सजिलो सहज सर्वसुलभ एवम् भरपर्दो तवरले स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी प्रदान गर्नु हो । यस्तै समय, परिवेश र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक नया“ प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ केही नेपाली डाक्टरहरुको पहलमा जनसरोकारका हरेक स्वास्थ सम्बन्धि मुद्दाहरुमा भलाकुसारी गने थलोको रुपमा हेल्थ कन्सर्न नामक स्वास्थ्य परामर्श सेवा सुरु गरिएको हो ।
नेपाल ग्रामीण परिवेशले बनेको त्यस्तो देश हो जहाँभनेको बेला उपयुक्त स्वास्थ्य उपचार पाउन सम्भव छैन अथवा एकदमै कठिन छ । विकासले बिस्तारै गति लिए पनि यहाँभौगोलिक अवस्थाले गर्दा पैसा खर्च गरेर पनि बिरामीले राम्रो उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यस्ता बिरामीहरुले अकालमै ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर हाल आएर आवश्यक परामर्श सेवाका लागि हेल्थ कन्सर्नले मोबाइल, इमेल, वेवसाइट आदिबाट पनि दुरदराजको पहुँच भएसम्म निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपालमा आजपनि यस २१ औं शताब्दीमा चार भागको तीन भाग जनसंख्या स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चितै रहेको अवस्था छ । राष्ट्रका दुर्गम गाउ“बस्तीहरुमा अहिले पनि एक चक्की सिटामोल नपाएर बिरामीहरु मृत्युलाई अंगाल्न बाध्य छन् । आज पनि मुलुकमा सही पद्दति, विधि स्थान र रोगको बारेमा जानकारी नभएर बिरामीहरु छटपटाइरहेको अवस्था छ । बिरामीहरुले एउटा चिकित्सकसंग आफ्नो रोगको बारेमा राम्रोसंग जानकारी ९ऋयगलअभििष्लन० गर्न पाउनु यो नै रोगको ४०५ मुक्त हुने मानसिक आधार हो र पनि यस्ता कुराहरुबाट हामी आज बन्चित भइरहेकको अवस्था छ । इन्टरनेट, मोबाइल इत्यादिको बढ्दो लहर भएतापनि नेपाली जनताहरु आज स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य ज्ञानहरुबाट जानकार छैनन् र त आज हामी हाम्रो गाउ“, समाजमा उपचारको बिधि थाहा नपाएर बिरामीहरु मृत्युशैयामा पल्टेका नमूनाहरु देख्न पाउछौं । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकथरी तत्वले पुरै व्यापारीकरण गरेको छ । महड्डो उपचार खर्चेर पनि बिरामी ठीक नहुनु, मरिसकेको बिरामीलाई जिवितै छ भनि ९क्ष्ऋग्० मा राखि शुल्क असुल्नु जस्ता अमानविय कार्यले गर्दा जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यति विश्वास नगरेको पनि देखिन्छ । बडा अफिसरदेखि नेतासम्मलाई स्वदेशमै अति भरपर्दो र सुलभ उपचार हुनु अनि आम जनतालाई भने एकरक्ति पनि राहत नहुन स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो खाडल हो ।
यस युगमा आएर आज पनि राष्ट्रका पश्चिम ग्रामीण बस्तीहरुमा बिरामीहरु झाडापखला, सामान्य सुत्केरी अवस्था, सामान्य दुर्घटना, सामान्य भाइरल ज्वरो आदि कुराहरुमै आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । समयमै उपचार नपाउनु वा घरेलु उपचार बिधिबारे जानकारै नहुनु यस्ता बिध्नबाधाहरु ग्रामीण गाउ“बस्तीका प्रमुख जटिलता नै बनेका छन् । मुलुकका कार्यकारी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव एक चिकित्सक भएर पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि ठोस मार्गदिशा नबनाउनु यो त मुलुककै स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक हांस्याद्मक इतिहास बन्न पुगेको छ । मानिसहरु आज स्वास्थ्य ज्ञानको अभावले गर्दा आफै रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । डाक्टर बिनाको प्रिस्कृप्सन ल्क्ब्क्ष्म्९एबष्ल पष्ििभच०, एन्टिबायोटिक औषधीहरुको सेवन गर्नु भनेको हाम्रो शरीरका महत्वपूर्ण अंगलाई क्षति पु¥याउनु हो । यस्ता सामान्य भन्दा सामान्य ज्ञानको अभाव बीचमा हामी स्वस्थ रहन सक्छौं । एउटा डाक्टर र बिरामीबीचमा समन्वय नहुनु बिरामीहरु हप्तै पिछे लहलहइमा लागेर डाक्टर फेरि फेरि औषधी सेवन गर्नु यी यावत समस्याहरुको आज नेपाली समाज कार्यतालिका नै बोकेर हिड्न बाध्य छन् । स्वस्थ जीवनका लागि उपयोगी दैनिकी नै हामीमा रहदैन यस्तो अबस्थामा कसरी हामी स्वस्थ रहन सक्छौ ? हामीलाई यतिसम्म ज्ञान रहदैन की कुन अंगको समस्याको लागि कुन डाक्टर उपयुक्त छ । जति परिवर्तनका नारा घन्काए पनि हाम्रो जीवन स्तर राम्रो त होला तर कहिले पनि स्वस्थ रहन सक्दैन त्यसका लागी हामी आफै यस्ता यावत कुराहरुमा जानकार रहन जरुरी छ साथैे हाम्रो समाजलाई पनि यस्ता कुराहरुबाट सजग गराउनु पदर्छ ।
यस्तै कयैन स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाधान परामर्श तथा भलाकुसारीको लागि “हेल्थ कन्सर्न” अति आवश्यक बन्न पुगेको छ वर्तमान नेपाली स्वास्थ्य जगतमा । उल्लेखित परिधिहरुको उचित समाधान र निवारणको केन्द्र बिन्दुको रुपमा आज हेल्थ कन्सर्न उभिएको छ । बिना सरकारी सहयोग बिशुद्ध निःशुल्क स्वास्थ्य क्षेत्रमा आयाम ल्याउने उद्देश्यका साथ आज यस संस्था लागिपरेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धि हरेक समस्याको समाधान आज हेल्थ कन्सर्न सँग छ । चाहे प्रत्यक्ष संवाद गरेर होस या यसको मोेबाइल एप्लिकेसन ९ज्यकतउष्तब िल्भउब०ि का माध्यम द्धारा आज हातहातमै घरघरमै स्वास्थ समाधानका निम्ति अहोरात्र खटिएको हेल्थ कन्सर्न नेपाल । यसको मूल उद्देश्य भनेको ग्रामीण समाजमा स्वास्थ्य उपचार सेवा लिनबाट बञ्चित भएकाहरुका लागि निशुल्क परामर्श सेवा दिनु हो साथै आजको युगमा मानिसले आफू अनुकुल स्वास्थ जीवन बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । स्वास्थ्य ज्ञान र दैनिक स्वास्थ्य जीवनमा आइपर्ने हरेक समस्याको निकास सम्पूर्ण जनताको हातहातैसम्म पुगोस् र हेरक मानिस निरोगी भएर बाँच्ने वातावरण सिर्जना होस भन्ने हो । स्वास्थ नागरिकबाट नै स्वास्थ मुलुकको कल्पना संम्भव छ र स्वास्थ मुलुक बाटै नयाँ नेपालको सपना साकार हुनेछ ।
लेखक नेपालगंज मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी हुन ।
२१ श्रावण २०७४, शनिबार १३:५२ प्रकाशित